Itiye lebhodlela letiyi - China Abakhiqizi betiye labenzi, abahlinzeki
❤ [MULTI-PURPOSE & CAPACITY]: Izimbiza zezingilazi zomthamo zingusayizi ofanele wokugcina izinongo, amakhambi, ujamu, okulondolozayo, itiye nokuningi. Usayizi ngamunye uphelele ekusetshenzisweni kwansuku zonke kwasekhaya.
❤ [IMPILO NOKUPHEPHA]: Iziqukathi zethu zezingilazi ezingezona ezinobuthi neze-BPA zinempilo ngokuphelele futhi ziphephile emndenini wakho. Inikeza ukumelana okuphezulu kokuqhekeka. Isethi ngayinye ifika ihlanganiswe ngokuphepha ebhokisini elinabahlukanisi ukuvimbela ukwephuka ngenkathi kuthunyelwa.
❤ [I-FRESHER & CLEANER]: Amabhodlela we-Flip-top kulula ukuwavula nokuwavala, futhi umlomo obanzi wenza kube lula ukugcwalisa nokukhipha. Isitsha ngasinye sengilazi sivalwe kahle, sifakwe i-silicone gasket kanye nensimbi yokukhiya insimbi engagqwali ukuqinisekisa ukuthi ukudla kwakho kuhlala kuhlanzekile, kuhlanzekile futhi kuphephile ngenkathi kugcinwa.
❤ [FASHION STYLE & KULULA UKUHLUKANISA]: Imbiza inomklamo wesitayela owenzelwe wonke amakhaya namabhizinisi. Sebenzisa isitsha ukukhonza ikhofi, itiye, ama-cocktails noma ukudala ubuciko.
❤ [ESEBENZISWA KABUSHA]: Izimbiza zilula ukuwashwa futhi zingasetshenziswa kaninginingi.Iglasi aliqedi, aligcini iphunga, noma lifaka amakhemikhali ekudleni.
500 ~ 1000ml okusobala ukubamba ingilazi imbiza